फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य ! पेट्रोल १३० र ग्यास १४५० — esagarmatha.com
फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य ! पेट्रोल १३० र ग्यास १४५०
ईसगरमाथा संवाददाताकाठमाण्डौ, ७ भदौ २०७८
काठमाण्डौ, ७ भदौ २०७८
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । बढेको मूल्य सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैंयाँ तथा डिजल र मट्टीतेलमा पनि प्रतिलिटर २ नै वृद्धि गरिएको छ।
नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर १३० रुपैंयाँ पुगेको छ । यस्तै डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ११३ रुपैंयाँ पुगेको छ । यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर १२८ रुपैंयाँ, डिजल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १११ रुपैंयाँमा बिक्री हुँदै आएको थियो । निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैंयाँले वृद्धि गरेको छ । यसअघि प्रतिसिलिण्डर १४२५ रुपैंयाँ मा कारोबार हुँदै आएको ग्यास अब १४५० रुपैंयाँ पुगेको छ ।
आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको मूल्यसमेत प्रतिलिटर २ रुपैंयाँले वृद्धि भई ८६ रुपैंयाँ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ प्रतिकिलो १६ डलरले वृद्धि गरी ७७० अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ ।
मूल्य बढाउँदा समेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ६४ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलण्डर ४२० रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा रहेको निगमको जिकिर छ । निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै निगमलाई ९६ करोड नौ लाख घाटा हुने देखिएको छ । निगमका अनुसार पेट्रोलमा कूल १९ करोड, डिजलमा १९ करोड ६ लाख र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ६२ करोड २२ लाख रुपैंयाँ बराबरको घाटा रहेको छ ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार पछिल्लो १५ दिनमा एक अर्ब १५ करोड २२ लाख बराबरको घाटा हुने देखिएपछि मूल्य वृद्धि गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । भारतीय सीमा क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ १९ पैसा, डिजल प्रतिलिटर ४४ रुपैयाँ ४ पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको छ ।